‘गठबन्धनवालालाई छोरी र श्रीमतीको चिन्ता छ, एमालेलाई देशको’
May 8, 2022 N88LeaveaComment on ‘गठबन्धनवालालाई छोरी र श्रीमतीको चिन्ता छ, एमालेलाई देशको’
रुपन्देही । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेले मात्रै देशका लागि चिन्ता गर्ने बताएका छन् । रुपन्देहीको बुटवलमा आयाजित विशाल चुनावी आमसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमालेले देशको चिन्ता गर्ने भएकै कारण ५ दलीय छोडेर सबै दल एकातिर भएपनि नेकपा एमालेको विजय यात्रालाई कसैले रोक्न नसक्ने बताएका छन् । ओलीले भने, […]
नेपाल–भारत सीमा नाका तीन दिनका लागि बन्द
May 8, 2022 May 8, 2022 N88LeaveaComment on नेपाल–भारत सीमा नाका तीन दिनका लागि बन्द
बैतडी । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल–भारत सीमा नाका तीन दिनका लागि बन्द हुनेभएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडीका सूचना अधिकारी खगेन्द्र भारतीका अनुसार भारतसँग सीमा जोडिएको झुलाघाट नाका सोमबारदेखि बन्द हुने भएको हो । निर्वाचन सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै वैशाख २७ गते रात्रि १२ बजेदेखि वैशाख ३० गते रात्रि […]
विश्व गधा दिवस मनाइँदै
May 8, 2022 N88LeaveaComment on विश्व गधा दिवस मनाइँदै
काठमाडौँ । परापूर्वकालदेखि नै कृषि र ढुवानी प्रयोगका लागि महत्वपूर्ण जनावरका रूपमा रहेको गधा संरक्षणबारे सचेतना जगाउन मे ८ मा विश्व गधा दिवस मनाइँदै छ । नेपालमा यस दिवसका सम्बन्धमा सरकारी तवरमा कुनै कार्यक्रम नभए पनि गैरसरकारी संस्थाहरूले भने दिवस मनाउन सुरुआत गरेका छन् । गधा कृषि, उद्योग तथा अन्य व्यवसायको क्षेत्रमा भारी बोक्ने काममा प्रयोग […]
May 8, 2022 N88LeaveaComment on तर्साएर मत माग्न पाइन्न : अध्यक्ष ओली
काठमाडाैं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । पार्टी कार्यालयले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकारसम्मेलनमा निर्वाचन भयरहित वातावरणमा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले मतदातालाई तर्साएर मतदान माग्न नपाइने बताउनुभयो । “आफूलाई मतदान नगर्नेलाई देश दुर्घटनामा जान्छ जस्ता अभिव्यक्ति दिएर मत […]
३९० जना जनप्रतिनिधिहरु निर्विरोध, एमाले पहिलो, कुन दलका कति ? (सूचीसहित)
May 8, 2022 N88LeaveaComment on ३९० जना जनप्रतिनिधिहरु निर्विरोध, एमाले पहिलो, कुन दलका कति ? (सूचीसहित)
काठमाडौँ । वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा देशभर निर्विरोध हुने जनप्रतिनिधिहरुको संख्या ३९० जना पुगेको छ । यसअघि निर्विरोध हुने प्रतिनिधि ३५२ जना रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको थियो । आयोगको पछिल्लो अध्यावधिक तथ्यांकअनुसार निर्विरोध निर्वाचित हुनेको संख्या ३९० पुगेको हो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिगराम शर्मा पौडैलले पहिला प्रावधिक कारणले गर्दा कतिपय स्थानीय […]